​‘बैंक अफ दि इयर २०१७’ बाट एनएमबी बैंक सम्मानित
काठमाडौं, १५ मंसिर । ‘बैंक अफ दी इयर २०१७ बाट’ एनएमबी बैंक सम्मानित भएको छ । बेलायतको फाइनान्सियल टाइम्सले हरेक वर्ष प्रदान गर्ने यस उपाधी यस वर्ष एनएमबी बैंकले पाएको हो । बैंकको वित्तीय अवस्था र वित्तीय विवरणबाट देखिने वित्तीय जोखिम न्युनिकरण क्षमताको आधारमा मात्र नभई वित्तीय समावेशीकरण, मल्टि च्यानल बैंकिङ लगायतको आधारमा समेत उपाधी दिइएको हो । २०७२ साल बैशाखमा गएको भूकम्प तथा नाकाबन्दीको… विस्तृत समाचार
​नेपाली जुत्तालाई प्रवद्र्धन गर्न भृकुटीमण्डपमा जुत्ता महाकुम्भ मेला
काठमाडौं, १५ मंसिर । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जुत्ता महाकुम्भ मेला सुरु भएको छ । नया“ मोडेलका नेपाली जुत्ताबारेमा ग्राहकलाई जानकारी दिई बिक्री गर्ने उद्देश्यसहित नेपाली जुत्तालाई प्रवद्र्धन गरी नयाँ मोडेलका जुत्ता मेलामा राखिएको आयोजकले जानकारी दिएका छन् । सातौँ सस्करणको मेलामा प्रत्येक वर्ष सातवटा कम्पनीले गरी करिब दुई सय नयाँ मोडेलका जुत्ता बिक्रीमा राखिने स्मार्ट सुजका प्रमुख जीवन श्रेष्ठले जानकारी दिए । अघिल्ला मेलामा युवा पुस्ता… विस्तृत समाचार
​ग्लोबल आइएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा जनक शर्मा पौड्याल नियुक्त
काठमाडौं, १३ मंसिर । ग्लोबल आइएमइ बैंकको सञ्चालक समितिले बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा जनक शर्मा पौड्याललाई नियुक्त गरेको छ । बैंकको बुधबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैंकठले यसअघि कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा रहेका पौड्याललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको हो । लण्डनबाट एमविए गरेका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौड्यालले बैंकिङ क्षेत्रमा ३० बर्षभन्दा बढीको अनुभव संगालिसकेका छन् । उनले सन् १९८७ मा इन्ट्री लेभलमार्फत… विस्तृत समाचार
​यमाहा सिभिल मल दसैंतिहार महोत्सव सम्पन्न
काठमाडौं, १३ मंसिर । सिभिल मलले गत दसैंतिहार अवसरमा सञ्चालन गरेको प्रवद्र्घनात्मक कार्यक्रम ‘यमाहा सिभिल मल दशैं–तिहार महोत्सव २०७४’ सम्पन्न भएको छ । गत भदौ २४ देखि कात्तिक १८ सम्म सञ्चालित कार्यक्रमअन्तर्गत १,००० वा सोभन्दा बढी रकम बराबरको सामान खरीद गर्ने ग्राहकमध्येबाट ३ जनाले यमाहाका उत्पादन प्राप्त गरेका छन् । विजेतामध्ये बुटवलका विजय राणाले यमाहा एफजेड–२५,बालाजुका असीम कोइरालाले यमाहा फेसिनो स्कुटर र गोंगबुका शक्ति थापाले यमाहा… विस्तृत समाचार
​यती एयरद्वारा यात्रु सेवामा प्रयोग नहुने विमान क्यानलाई हस्तान्तरण
काठमाडौं, १३ मंसिर । यती एयरलाइन्सले आफूसँग भएको यात्रु सेवामा प्रयोग नहुने बिएई प्रणालीको जेटस्ट्रिम ४१ (सिरियल नं. ४१०१७) लाई भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थलअन्तर्गतको उद्धार तथा अग्नि निवारणको दैनिक अभ्यासमा प्रयोग गर्न हस्तान्तरण गरेको छ । कम्पनीका ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ मेनेजर अंकुरजंग राणाले गौतमबुद्ध विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय प्रमुख शिशिल चित्रकारलाई विमान हस्तान्तरण गरेका थिए । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेपालले विमानलाई अग्नि नियन्त्रण तथा आकस्मिक उद्धार तालिमका… विस्तृत समाचार
​एनएमबीको भिसा प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड
काठमाडौं । एनएमबी बैंक र भुक्तानी प्रविधि सञ्जाल भिसाले संयुक्त रूपमा भिसा प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड सुरु गरेका छन् । कार्ड सेवा सुरु भएसँगै एनएमबी बैंक नेपालमा भिसा प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड सेवा प्रदान गर्ने दोस्रो बैंक बनेको छ । एनएमबी भिसा प्लेटिनम क्रेडिट कार्डमा इएमभी चिप प्रविधि जडान गरिएको छ, जुन कार्ड विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार्य हुनुका साथै कारोबार प्रमाणिकता, छिटो उपलब्धता, सुविधादायक र सुरक्षित कारोबार माध्यमका… विस्तृत समाचार
​गुराँस लाइफको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा भट्टराई
काठमाडौं, १२ मंसिर । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समितिको १४२औँ बैठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नारायणकुमार भट्टराईलाई ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ । भट्टराईले भारतको पुने युनिभर्सिटीबाट बिएस्सी तथा मनिपुर युनिभर्सिटीबाट एमबिए उपाधि प्राप्त गरेको कम्पनीले जनाएको छ । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपालमा करिब ९ वर्ष सेवा गरी ०६८ मंसिर १ देखि गुराँस लाइफमा सहायक महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त भएका भट्टराई ०७० माघदेखि नायब महाप्रबन्धक… विस्तृत समाचार
​तरलता अभाव : कति वास्तविक ?
काठमाडौं, १२ मंसिर । गत वर्ष झैं यो वर्ष पनि कात्तिक महिनामा बैंकि¨ क्षेत्रमा नगद तरलताको अभाव देखिएको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद तरलताको अभावलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यसहित मंसिर पहिलो साता दुई पटक जारी गरेको रिपोमा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था सहभागी नहुनुले नगद तरलताको अभाव नभएको पुष्टि भएको छ । मंसिर १ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको २० अर्बको रिपोमध्ये बैंक… विस्तृत समाचार
​कर छली प्रकरणमा तानिँदै महतो
काठमाडौं, १२ मंसिर । एनसेलका नाममा भइरहेको कर छली प्रकरणमा गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो तानिने भएका छन् । १ खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँबराबरमा एनसेल बेच्दा पुँजीगत लाभकर नतिरेको भन्दै स्वीडेनको टेलियासोनेराका नाममा ६२ अर्ब रुपियाँ कर निर्धारण भएको छ । त्यसैगरी २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेका निरजगोविन्द श्रेष्ठले आफ्नो नामको सेयर बेच्दा समेत त्यही कर छलेको भन्दै सरकारले पुनः कर निर्धारण गरेको… विस्तृत समाचार
काठमाडौं, १० मंसिर । ग्लोबल आइएमई बैंकले थप ३ स्थानमा शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालन गरेको छ । बैंकले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका, ब्रह्मदेव तथा कञ्चनपुरकै कृष्णपुर नगरपालिका, वाणी र डडेल्धुराको पर्शुराम नगरपालिका सादनीमा शाखारहित बैंकिङ सेवा सुरु गरेको हो । तीन स्थानमा विस्तारित सेवासहित बैंकका शाखारहित सञ्जाल ४९ पुगेका छन् । बैंकले भीमदत्त नगरपालिका, ब्रह्मदेवमा रमेशबहादुर खड्का, कृष्णपुर नगरपालिका वाणीमा भरत महता र पर्शुराम नगरपालिका सादनीमा… विस्तृत समाचार
‹ First Newer 31 32 33 34 35 Older Last ›